Tilmicosin Phosphate Tilmicosin phosphate no farany mampivoatra ny antibiotika macrolide ho an'ny fahasalaman'ny biby, io ny midicative midicine of tylosin, tena ampiasaina dia miaro ny aretina ny rafitry ny taovam-pisefoana, mecoplasmosis, otrikaretina bakteria ho an'ny kisoa, akoho, omby, ondry. Anarana: Solmicosin Phosphate Molecular formula: C46H80N2 O13 · H3PO4 Ny lanjan'ny molekiola: 967.14 CAS: 137330-13-3 Toerana: hazavana mavo na mavo manopy mavo, mety ho levona anaty rano izy io. Fenitra: Enterprisestandard, a ...
Ny Tilmicosin Tilmicosin no vaovao farany mampivoatra ny antibiotika macrolide ho an'ny fahasalaman'ny biby, io dia ny midicative midicine of tylosin, tena ampiasaina miaro ny aretina avy amin'ny rafitry ny taovam-pisefoana aretin'andoha, mycoplasmosis, otrikaretina bakteria ho an'ny kisoa, akoho, omby, ondry. Anarana: Formula molmicosin molekular: C46H80N2O13 lanjan'ny molekiola: 869.15 CAS no: 108050-54-0 Toerana: jiro mavo na loko mavo. Fenitra: Usp34 Famonosana: amponga 20kg / baoritra, 6kg / plastika drum 6drums isaky ny baoritra. Stor ...
Tiamulin Hydrogen Fumarate Tiamulin hidrogen fumarate dia antibiotika matihanina ho an'ny fanafody biby, ampiasaina indrindra amin'ny fiarovana ny aretin'ny taovam-pisefoana ho an'ny kisoa sy ny akoho, dia afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny biby. Anarana: Tiamulin hidrogen fumarate Formula molecular: C28H47NO4S · C4H4O4 Ny lanja molecular: 609.82 CAS no: 55297-96-6 Toerana: vovoka fotsy na fotsy_like Standard Standard: USP34 Packing: 25kg / baoritra amponga fitehirizana: tazomina amin'ny fitoerana maivana, rivotra ary maina. Atiny: ≥98% Ap ...
Florfenicol Sodium Succinate Anarana amin'ny vokatra: Florfenicol sodium succinate Toerana simika: vovoka kristaly fotsy na fotsy toa fotsy, tsy misy fofona ary tsy matsiro, rehefa feno solika ny rivotra mandalo ity vokatra ity dia somary madiodio any anaty acetone, etanol, mora soloina anaty rano, misy ny sodium florfenicol dia tsy latsaky ny 95%. Zary vokatra: 1. Ny sodium Florfenicol dia manamboatra ny fahatsinjovana Florfenicol amin'ny 300mg / ml ary nampiana in-400. 2. Ny sodium Florfenicol dia manamboatra ny ...